Kasmo Xumada Kooxada Jwxo-shiil oo Kaddeed Siyaasadeed u Keentay Ururka ONLF, Iskandaniviankana Kuwo Lagu Xidhay – Rasaasa News
May 7, 2010 Iskandaniviankana Kuwo Lagu Xidhay, Kasmo Xumada, Kooxada Jwxo-shiil, oo Kaddeed Siyaasadeed, u Keentay Ururka ONLF
Waxaa baryahan dambe si aan qarsasho lahayn uga dhex muuqday meelo badan oo fagaare ah calanka ururka ONLF oo ay wataan taageerayaasha Jwxo-shiil, kuwaas oo muujinaya taageero xoog leh oo ay u hayaan xukuumada Eritrea.
Taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, waxay si indho la,aan ah uga qayb qaataan kulamada ay leeyihiin Jaaliyadaha dibada ee dalka Eritrea [Eritrean Diaspora], kulamadaas oo ay qaban qaabiyaan safaaradaha Eritrea ay ku leedahay dalalka reer galbeedka, ayaa inta badan lagu qabtaa dhismayaasha safaaradaha Eritrea.
Waxaa kale oo iyana nasiib daro wayn oo siyaasadeed ah, in taageerayaasha kooxda Jwxo-shiil, ay si caqli daro ah uga qayb qaataan banaanbaxyada Jaaliyadaha reer Eritrea ee ay qaban qaabiyaan safaaradaha Eritrea, banaan baxyadaas oo laggaga horjeedo siyaasadaha reer galbeedka.
Eritrea, ayaa aduunku isku raacay in ay tahay dal hoy siiya ururada wax kharbuda, ka dib kolkii ay diiday talooyin loo soo jeediyeyna la saaray takoor siyaasadeed.
Ururka ONLF, oo qaybsanaantiisa siyaasadeed mooyaane aan lagu tirin jirin xiliyadan ururada xag jirka ah, ka dib kolkii sanadkii 2001 ay dawlada Maraykanku ka saartay warar been abuur ah oo ay Itobiya hore ugu eedayn jirtay.
Siyaasad daro wayn ayaa xiligan soo food saartay taageerayaasha iyo xubnaha ururka ONLF, ka dib kolkii ay kooxda Jwxo-shiil, si hamatul hamagnimo ah ay ugu dhex milantay siyaasada takooran ee Eritrea.
Ciidanka Nabad Sugida ee dalka Finland ayaa dhawaan su,aalo waydiiyey xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, ka dib kolkii wariye u dhashay dalka Finland oo booqday Eritrea uu helay sir. Wariyaha ayaa dalka Eritrea kula kulmay dhawr dhalinyaro ah oo si wanaagsan ugu hadlayey afka Finish-ka.
Wariyaha ayaa waydiiyey dhalashada ay haystaan iyo sababta ay Eritrea u joogaan, waxayna u sheegeen in ay Finish yihiin, ayna u socdaan in ay ka dagaalamaan dhulka Ogaden. Arintan oo dhacday Novemver sanadkii ina dhaafay, ayay dawlada Finland ogaatay in qaar ka mid ah dadka Finish-ka ay ku jiraan arimo ayna dawladu jeclayn.
Dalalka Scandanivianka, ayaa si wada jir ah u qaaday talaabo ku aadan, taageerayaasha ururka ONLF, lamana ogga in ay u kala soocan yihiin labada garab ee ONLF iyo in isku si loola dhaqmi doono. Waxaa muuqata in talaabooyinka la qaaday lagu beegsanayo ururka ONLF iyo ururka xag jirka ah ee Al Shabaab Somalia.
Halganka uu waday ururka ONLF, ayaa ka afuufmayey dalalka reer galbeedka, ololakiisuna ka baxayey dhulka Somalida Ogadeeniya ee ay Itobiya gacanta ku hayso. Masuuliyiinta ururka oo degan dalalka reer galbeedka ayey suurto gal tahay in ay si toos ah u saamayso arinkani.
Arinkani waxaa uu qayb ka yahay siyaasada gondo faruurantay ee ururka ONLF, taas oo aan gadaal looga noqon karin guuldarada siyaasadeed ee haysata maanta ururka, waxaana asal u ah madax adayga Jwxo-shiil iyo afduubka Eritrea. Magac bixinta taariikheedna waxaa lagu koobay magaca “Jwxo-shiil”.